न मल न मनसुन !! मानो रोपेर मुरी होला ?’ – Ganatantra Online
न मल न मनसुन !! मानो रोपेर मुरी होला ?’
सोमबार, आषाढ १६, २०७६ ११४९४३
दाङ, असार १६ । असारको आधा महिना वित्यो । असारसँगै सुरु हुने धान रोपाई आधा असार सकिदासम्म भर्खरै फाट्फुट् सुरु हुन लागेको छ । हिजो असारको १५ दाङ लगायत देशै भरी धान दिवस मनाइयो र किसानको खेलमा पुगेर रोपाई गरियो । घोराही उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखाले वडा नम्वर १५को हापुरमा आयोजना गरिएको धान दिवसमा सहभागि एक जना कृषक निकै रिसाएका जस्ता देखिन्थे ।
कारण बुझ्दा समयमा मल नपाउदा र मनसुन सुरु नहुदाँ रोपाई गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । उनी भन्दै थिए ‘असार सकिन लाग्यो न मल पाइन्छ न पानी पर्छ । किसानको बेहाल भयो ।’रोपाई न हुनुको मुख्य कारण सिँचाई र धानलाई आवश्यक पर्ने रासायनीक मल भएको अन्य किसानहरुले पनि गुनासो गरिरहेका थिए । किसानहरुलाई अनुदानमा दिइने रासायनीक मल सरकारले ल्याउनमा ढिलाई गरिरहेको छ । जसको कारण किसानहरु मारमा परेका छन् । जिल्लामा अहिले धानको विरुवामा प्रयोग गरिने डिएपी प्रयाप्त भए पनि युरिया भने थोरै मात्र छ । जुन धानलाई अहिले नभै नहुने मल हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल पनि किसानले समयमा मल नपाएको गुनासो पटक पटक केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराए पनि ढिलासुस्ती भैरहेको बताए । उनले भने ‘किसानहरुले मल पाउनु भएको छैन । उहाँहरुको गुनासो पठाईरहेका छौ तर सुनुवाई भएको छैन ।’ धान रोप्ने समयमा किसानले मल र सिचाई नपाए सिंगो देशको अन्न उत्पादनमा असर पर्ने उनको भनाई छ ।
तथ्याङक अनुसार दाङमा रोपाईको मौसममा २० देखि २५ हजार मेट्रीकटन मलको आवश्यक पर्छ तर जिल्लामा १० हजार मेट्रिकटन पनि भित्रिएको छैन । यसको अर्थ आधा भन्दा बढी किसान मल कै अभावमा छन् । मल अभाव पछि जताजतै गुनासो बढेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि सामाग्री केन्द्रमा किसानहरु मल किन आउदैन भनेर पटकपटक सोध्न आउने गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउछन् । केन्द्र सरकारलाई यसको बारेमा पटकपटक जानकारी दिने काम गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
कृषि मन्त्रालयले किसानलाई अनुदानमा मल दिने, अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको रकम निकासा गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनको उपयोग गरेर मल खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने जस्ता दोहोरो तेहेरो झण्झटिलो प्रक्रियाको कारण पनि मल खरिदमा अलमल भएको जानकारहरु बताउछन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा बर्षात ढिला भएर नै रोपाई हुन नसकेको हो । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेत बर्षात नभए कै कारण दाङमा रोपाई छिट्फुट मात्रै सुरु भएको छ । देउखुरीको राप्ती र लमहीमा करिव १ हजार हेक्टर जतिमा रोपाई भएको अनुमान गरिए पनि अधिकासं ठाउँ बाँझै छ । अझै मनसुन सुरु नभएर किसानको मानो रोपेर मुरि फलाउने चाहाना, कथा मै विलिन हुनेछ ।
‘दाङ आकासे मनसुनको भरमा खेती गर्नुपर्ने ठाउँ हो । यहाँ प्रसस्त सिचाई नहुदाँ यस क्षेत्रलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र भनेर भनिन्छ ।’ ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बस्नेतले भने ‘पछिल्लो समय सिचाईको लागि कुला, डिपवोरिङ पनि तयार गरिएका छन् तर आवश्यक छैन ।’ पहिले देखि नै यहाको सानासाना खोला, राप्ती नदी, बबई नदीको पानीको भरमा सिचाई गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दाङको २९ प्रतिशत खेती योग्य जमिन मात्र सिचाई हुने गरेको छ ।
दाङमा ७० हजार हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्य ३७ हजार हेक्टरमा मात्र धान रोपिन्छ भने ५ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिन अझै बाँझो छ । धान नरोपिने क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको रुपमा लिइने अन्य बालिहरु गहु, मकै कोदो, फापर र जौ आदि रोपने गरिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार दाङमा १ लाख १८ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेको छ । तर जिल्लामा १ लाख ११ हजार मात्रै धान खपत हुन्छ । अहिले दाङमा धानको करिव ७÷८ वटा जातका विरुवा रोप्ने गरिएको छ ।
ज्ञान केन्द्रका अनुसार सिँचाई हुने ठाउँमा सावित्री, रामधन, मनसुली रोपिन्छ भने सुख्खा क्षेत्रमा सुख्खा १, सुख्खा २, सुख्खा ३, हर्दिनाथ, राधा चार, हाइव्रेडहरु रोपिन्छ । अहिले स्थानिय तहले अनुदानमा धानको विउ वितरण गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा कृषि त्यसमा पनि धान उत्पादन गर्नु निकै कष्टको काम मान्निन्छ । धेरै श्रम गर्नुपर्ने, पानी, माटो, हिलोमा डुवेर काम गर्नुपर्ने हुदाँ यहाँका किसानहरुले पेसा परिवर्तन गर्ने, धान रोप्ने छोड्ने जस्ता गतिविधि बढेको हुदाँ यसलाई रोक्नको लागि कृषिमा यान्त्रीकिरणको आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।
आइतवार असारको १५ पारेर देशभर १६ औँ धान दिवस मनाइयो । देशभर दिवस मनाइरहदाँ सबै स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु, विषयगत कार्यालयका प्रमुख, संघसस्थाहरुले धानको विउ र फुलको माला लगाएर सिगारिदै धान रोपे । धानको विरुवा रोपेको फोटो आयो तर किसानको खेलमा मल र मनसुन आएन ।